'' Tamaño '' နာမ်သို့မဟုတ်နာမဝိသေသန Be နိုင်သလား
Tamañoများအတွက်အသုံးအများဆုံးစပိန်စကားလုံးက "အရွယ်အစား။ " ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအဖြစ်က၎င်း၏အသုံးပြုမှုအချို့ကိုဥပမာ နာမ် ။ ကအရွယ်အစားသူတို့ကိုယ်သူတို့ရည်ညွှန်းထက်စကားလုံး အသုံးပြု. tamaño်စာကြောင်းဘာသာပြန်ဆိုတခါတရံပိုပြီးသဘာဝအကြောင်းသတိပြုပါ "အရွယ်အစား။ "
အဘယ်သူမျှမ el tamañoက de tu ropa SE ။ (ငါသည်သင်တို့၏အဝတ်အစားအရွယ်အစားမသိရပါဘူး။ )
¿ De Que tamaño debe SER el cuestionario? (သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမေးခွန်းလွှာဖြစ်သင့်?)
အယ်လ်tamaño del cerebro del bebe es တစ်ကိုယ်တော် un 25 por ciento del Que tendré cuando ပင်လယ် adulto ။ (ကကလေးရဲ့ဦးနှောက်၏အရွယ်အစားသူမကအရွယ်ရောက်မယ့်အခါဖြစ်လတံ့သောအရာကိုသာ 25 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ )
Quiero archivo adjunto က de Gran tamaño un enviar ။ (ကျနော်ကြီးမားတဲ့ပူးတွဲဖိုင်ပို့ချင်။ )
Puedes obtener un descuento en un tatuaje က de cualquier tamaño။ (သင်မည်သည့်အရွယ်အစားတစ်ဦးတက်တူးထိုးအပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးရနိုင်။ )
အယ်လ် artista Italiano crea esculturas က de madera တစ်tamañoသဘာဝက။ (အဆိုပါအီတလီအနုပညာရှင်ဘဝ-size ကိုသစ်သားပန်းပုဖန်တီးပေးပါတယ်။ Tamañoအစစ်အမှန်အတူတူဓိပ်ပာယျနှငျ့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီနိုင်။ )
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los mamíferosက de tamaño medio pueden SER los စရဖတစ်ဦး extinguirse propensos ။ (အလတ်စားအရွယ်နို့တိုက်သတ္တဝါများမျိုးသုဉ်းသွားကြဖို့အကြီးမြတ်ဆုံးစိတ်သဘောထားနှင့်အတူသူမြားဖွစျနိုငျသညျ။ )
el tiempo က de hornear မူတည် del tamaño del ဒယ်အိုး။ (အဆိုပါမုန့်ဖုတ်အချိန်ရှိသောမုန့်မုန့်၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။ )
el tamañoအကျွမ်းတဝင် Con, 166 lavados မသန်စွမ်း todo tipo က de ropa obtendrás။ (မိသားစုအရွယ်အစားနှင့်အတူ, သငျသညျအဝတ်အစားအမျိုးအစားတိုင်းများအတွက် 166 အဝတ်လျှော်ဝန်ရလိမ့်မယ်။ )
Voy တစ် comprar un servidor က de impresiónက de tamañoက de bolsillo ။ (ငါတစ်အိတ်ကပ်-size ပုံနှိပ် server ကိုဝယ်ခြင်းငှါမယ်။ )
Tamañoလည်းတစ်ဦးအဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ် နာမဝိသေသန "" အဲဒီလိုကြီးမားတဲ့ "ဆိုလိုဆင်တူထိုကဲ့သို့သော" သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။ နာမ်အဖြစ်tamañoစဉ်သတိပြုပါ ပုလ် တစ်နာမဝိသေသနအဖြစ်tamañoအောက်ပါအတိုင်းသောနာမ်များ၏ကျားနဲ့နံပါတ်ကိုက်ညီရမည်ဖြစ်သည်။
အကြှနျုပျ၏ Madre dijo tamañas palabras en una de esas ocasiones ။ (ကျွန်မအမေသူတို့အားအခါသမယ၏တဦးတည်းအပေါ်ယင်းသို့ကြီးမားသောစကားလုံးများကိုဆိုပါတယ်။ )
¿Cómo es posible Que un niñoက de siete ပင်လယ်años capaz က de tamaña aventura? (မည်သို့ကြောင့်7နှစ်အရွယ်ထိုကဲ့သို့သောစွန့်စားမှုနိုင်စွမ်းဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်?)
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los libros hacen tamaña diferencia en Las vidas del nuestros hijos ။ (စာအုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးများ၏ဘဝအသက်တာ၌ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသောကွာခြားချက်စေ။ )
es tamaño insulto မသန်စွမ်း la inteligencia ။ (ဒါဟာထောက်လှမ်းရေးမှထိုကဲ့သို့စော်ကားမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ )
Tamañoဆိုလိုတာကလက်တင် Tam magnos မှလာ "ဒါကြောင့်ကြီးမားသော။ "
tamañoသကဲ့သို့စွယ်စုံမဟုတ်ပေမယ့်, talla မကြာခဏအသုံးပြုသည် "အရွယ်အစား," အဝတ်အစားသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအရွယ်အစားအကြောင်းပြောနေတာအထူးသဖြင့်လာသောအခါ: Normalmente Las tallas သားရေိစရဖ Grand Que Las europea ။ (ပုံမှန်အားဖြင့်အမေရိကန်အရွယ်အစားဥရောပသူတွေကိုထက်ပိုကြီးတဲ့ကို run ။ )
တခါတရံတွင် "အရွယ်အစား" အဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုအခြားစကားများ altura (အမြင့်), ancho (အကျယ်), capacidad (စွမ်းရည်), Dimension (အတိုင်းအတာ), medida (တိုင်းတာခြင်း) နှင့် volumen (အသံအတိုးအကျယ်) တို့ပါဝင်သည်။
နမူနာစာကြောင်းများ ElOrigenDelHombre.com, Sabrosia.com Prezi.com, Cultura Inquieta, MuyInteresante.es, GroupOn.es, Jasnet က de ဘာစီလိုနာနှင့် ElPlural.com ပါဝင်သည်ကြောင်းသတင်းရင်းမြစ်များမှဆင်းသက်လာခဲ့သည်။
Ikinasai - ရိုးရှင်းသောဂျပန်စကားစုများ
ပြင်သစ် en Lucie: ပြင်သစ်စာဖတ်ခြင်းနားလညျမှု
ပြင်သစ်ရထားဝေါဟာရ - Prendre le ရထား En ပြင်သစ်
ဂျပန်နှုတ်ကပတ်တော်ကို Kouhei Learn
( 'ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်') ပြင်သစ်ကြိယာ '' ပါဝင်သူ '' Conjugate လုပ်နည်း
New Hampshire ၏ဒိုင်နိုဆောများနှင့်သမိုင်းမတိရစ္ဆာန်များ
အဆိုပါ Sindhu (Indus) မြစ်
ဆီးရီးယားသမ္မတ Bashar el အာဆတ်: ကိုယ်ရေးဖိုင်
၏ Citrus ရေနံနှင့်အတူတစ်ဦး Mini ကို-Flamethrower Make
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los6puntos básicos de las ဗီဇာ J ကို-1 က de intercambio Que debes ဖုံးကိုဓားရှည်
စဲလ်လီ Cruz တို့ကထိပ်တန်းသီချင်းများ
ပြင်သစ်နှင့်အိန္ဒိယစစ်ပွဲ: အ Monongahela ၏တိုက်ပွဲ
အဆိုပါ PGA Tour အပေါ်အရှည်ဆုံးရုတ်တရက်-မရဏ PLAYOFF
Set-Up ကို binding Wakeboarding
တစ်ဦးစာအုပ်ကလပ် Start ထိန်းသိမ်းနည်းလုပ်နည်း
ဤတွင်ကိုသင်ပြေးနေတဲ့ PHP ကို၏ဗားရှင်း Check ဖို့ကိုဘယ်လိုဖွင့်
သင့်မွေးနေ့ Card များကိုအထူး Make မှမွေးနေ့မေတ္တာနှင့်ကြားလိုက်ပါ၏
တစ်ဦး PGA Tour ပြိုင်ပွဲများတွင်အများစုမှာဆက်တိုက် Birdies
Log in ဝင်ရန် Cabin နှင့်အတူအမေရိကားရဲ့မေတ္တာကို Affair အကြောင်း
ထိပ်တန်း 10 ရော့ခ်အခွန်အယ်လ်ဘန်
ပညာရေးဘရောင်း v ။ ဘုတ်အဖွဲ့
Tennessee ပြည်နယ်, အပေါ့ပေါ့ပါးပါးကို Traveller များအတွက်တစ်ဦးကလမ်းညွှန်အတွက်ဗိသုကာပညာ
နက်ရှိုင်းသော Away ဘဏ် မှစ. ငါးမျှား